पूर्वाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी सम्पन्न – ::नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान::
पूर्वाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी सम्पन्न
विराटनगर । पूर्वाञ्चलको ऐतिहासिक नगरी विराटनगरमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले हीरक वर्षको अवसरमा ‘पूर्वाञ्चल वाङ्मय गोष्ठी’ आयोजना गरेको छ । फागुन १९ र २० गते हाटखोलास्थित आरोहण गुरुकुलमा सम्पन्न सो गोष्ठीमा समालोचना, संस्कृति, मातृभाषा र उपन्यास सम्बन्धी कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । समालोचनासम्बन्धी रामजी तिमल्सिना, संस्कृतिसम्बन्धी डा. सोमप्रसाद खतिवडा, मातृभाषासम्बन्धी मुनाराज शेर्मा र उपन्याससम्बन्धी डा. गोपाल भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि क्रमशः डा हरिहर भण्डारी, दधिराज सुवेदी, देवान किराँती र डा. बद्रीविशाल पोखरेलले टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।